သင် – သင့်ချစ်သူ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝှိက်မှာ” မှဲ့” ရှိနေလား ရှိနေတယ်ဆိုရင် ဖတ်ကြည့်ပါ
နုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့”ပါတဲ့သူ အများစုဟာသနားစရာ၊
ပွစိပွစိလုပ်တာကတော့ ဝါသနာပါ :-p
ခဲ့ရင်တောင် ကိုယ်ကူညီလိုက်တဲ့သူအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင် ကြည်နူးပီတိဖြစ်နေတတ်တဲ့သူတွေပါ📲🔈🔉
နုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့”ပါတဲ့သူတွေဟာ စေတနာလည်းအရမ်းကောင်းသလိုသံယောဇဉ်လည်းအလွန်ကြီးကြတဲ့သူတွေပါ။🎆သူတို့ဟာစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်လည်းလွယ်ပါတယ်။ခဏခဏလည်းစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တတ်ပါတယ်😩😫စိတ်ကောက်လည်းခဏပဲ။ ချော့မယ့်သူရှိရင်တော့ဟန်အမူပိုပြီးဆက်ပြီးတော့စိတ်ကောက်ဟန်…ဆောင်နေတတ်ပါတယ်။ချော့မယ့်သူမရှိရင်တော့သူ့အလိုလိုပျော့သွားရော😂😂📹📷📹📷
ဖြစ်ခဲ့သမျှ အတိတ်တွေကိုတော့ အမြဲမမေ့ဖျောက်နိုင်ပဲ အမှတ်ကြီးတဲ့သူတွေပါ။✂✂✂📂📁
နုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့”ပါတဲ့သူတွေဟာအများအားဖြင့်ကိုယ့် ဘဝကို📏📐စိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်နေတတ်ပါတယ်။သူများအကြည့်တွေကိုလည်း
သူများစကားကိုယုံပြီးလက်ခံတတ်တဲ့အတွက် အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းစဉ်းစားနေတာနဲ့ပဲအချန်ိကုန်သွားတတ်တယ်။@}-;-‘– @}-;-‘-လုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကို အများအားဖြင့်ပြဿသ၁နာဖြစ်မယ်🎻🎺🎷၊ဆုံးရှုးံမယ်ဆိုပြီးမကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲ အများအားဖြင့် တွေးလေ့ရှိတယ်။🏀⚽🏀
နုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့”ပါတဲ့သူတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုမြတ်နိုးသူတွေပါ။🍭🍭ဖြစ်နိုင်ရင်ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းပဲ
တောင်းပန်ရမှာကိုတော့ သေလောက်အောင်မုန်းတယ်။သူအမှားတစ်ခုလုပ်မိပြီဆိုရင်လည်းနောင်တရမဆုံးဖြစ်နေတတ်တာနုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့”ပါတဲ့သူတွေပါ♕ ♕ ❆
ဦးစားပေးတတ်တယ်။ ..❦ ❦ သနားတတ်တယ်။❦ ❦
အားနာတတ်တယ်။❦ ❦ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်မိသားစုအပေါ်မှာတော့အနိုင်ယူချင်တယ်။♨ ♨ ♨
နုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်”မှဲ့”ပါတဲ့သူတွေကိုချစ်သူခင်သူလည်းပေါသလို❦ ❦ အပေါင်းအသင်းလည်းများပေမယ့် ….အများအားဖြင့်တစ်ယောက်တည်းနေရတာကိုပဲ…သဘောကျပြီးတစ်ယောက်တည်းပဲဖစ်နေတတ်ပါတယ်🍑🍑👲👳👲👳
နုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့”ပါတဲ့သူတွေ ကဒေါသကလည်းအရမ်းကြီးတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့်တော်ရုံတန်ရုံစိတ်မဆိုးတတ်ပါဘူး။☺☺စိတ်ကလည်းအရမ်းမြန်တယ်။ သူမှန်တယ်ထင်ရင်ဘယ်သူ့ကိုမဆို ရင်ဆိုင်ရဲတယ်။
ဘာမဆိုလုပ်ရဲတယ်။ ကိစ္စတစ်ခုကိုလုပ်ချင်ပြီဆိုရင်လည်းဇွတ်လုပ်တတ်တယ်။😄😃သူ့ကိုမခံချင်အောင်၊…ဒေါသထွက်အောင်မထိတထိသွားလုပ်တဲ့သူတွေဆို …အရွဲ့ပြန်တိုက်ရ်မှကိုကျေနပ်တယ်။
စိတ်တိုနေပြီဆိုရင်တော့😠😠မျက်နှာထားကတင်းတင်းနဲ့ တစ်လောကလုံးသူ့လုပ်စာကိုပဲထိုင်စားနေရသလို 😡😡ဘယ်သူနဲ့မှကိုစကားမပြောချင်တော့ဘူး😷😷😷😷😷
နုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်”မှဲ့”ပါတဲ့သူတွေဟာချစ်သူအပေါ်မှာလည်း….ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးထက်ချစ်သူရဲ့ စိတ်ကူးကိုပိုပြီးဦးစားပေးတတ်ကြပါတယ်။ 😍😍😍ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကိုလည်းလိုတာထက်ပိုပြီးတော့သဝန်တိုတတ်ကြတယ်။
ပြီးတော့စ်ိထဲမှာရှိတိာကုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမပြောရဲကြဘူး➳ ➳ ➳
မြတ်နိုးသလောက် ဂရုစိုက်သလောက် ကြင်နာ သလောက် တွယ်တာသလောက် အလေးထားသလောက် နားလည်မှု တွေခွင့်လွှတ်မှုတွေရှိသလောက်
နုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်”မှဲ့”ပါတဲ့သူတွေဟာတစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက်ပိတောက်ဆိုပိတောက်ပါပဲ်??????ဘူးဆိုဖရုံမသီးတတ်ပါဘူး😎😎စိတ်ခံစားမှုကလည်းအရမ်းပြင်းထန်တဲ့အတွက် ချစ်သူနဲ့ပတ်သတ်ပြီးဘာမဟုတ်တာလေးကအစ စိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းခံစားတတ်ပါတယ်။😩😫
Credit – Org
Previous ချမ်းသာအောင် အချိန်တိုင်းကြိုးစားနေပေမယ့် ဘာလို့မချမ်းသာသေးတာလဲ?
Next ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခု ထူထောင်တော့မယ်ဆိုရင် စဉ်းစားသင့်တဲ့အချက် (7) ချက်